Golaha Shacabka oo aan maanta u kala harin meel marinta Miisaaniyadda 2019 – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo aan maanta u kala harin meel marinta Miisaaniyadda 2019
Golaha Shacabka ayaa meel mariyey Miisaaniyadda 2019-ka, oo ay 2 maalin oo xiriir ah ka doodayeen. 174 Xildhibaan oo joogtay Kulankii Golaha ee maanta ayaa cod gacan taag ah ku ogolaatay Miisaaniyadda. Ma jirin Xildhibaan diiday ama ka aamusay.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in miisaaniyaddii ay soo diyaariyeen uusan Xildhibaanna diidin, kana aamusin. “Waxaan ku shaqeyn doonaa sharciga iyo qoondada aad maanta meel mariseen” ayuu Beyle ku yiri Golaha Shacabka.
Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda, Maxamuud Siraaji, ayaa intaanu Goluhu ansixin miisaaniyadda waxa uu sheegay in ay kusoo dareen dhamaan aragtidii uga soo baxday dooddii uu shalay Goluhu mariyey miisaaniyadda. “Waxaan shaqeynay maalin iyo habeen, si aan u saxno haddii ay jiraan qaladaad yar yar” ayuu yiri Xildhibaan Siraaji.
Welwelka ugu weyn ee uu Goluhu qabay waxay ahayd inuu curto sanadka soo socda, iyada uusan Goluhu sharciyeen miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqeyn lahayd. Hadda waxa uu Hindisaha Miisaaniyadda sanadka soo socda aaday Golaha Aqalka Sare, oo isagana la filayo inuu meel mariyo berri.
Wasiirka Maaliyadda oo balan qaaday in Miisaaniyadda 2019 loo fulin doono sida ay u qoran tahay
Xildhibaan u sheegay Waasaaradda Maaliyadda ineysan isticmaali karin Miisaaniyad dheeri ah